ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚ အတြက္ ရိကၡာ ေတြ ေတာင္ေအာက္ ဆင္းယူေပးတဲ့ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသားေလးရဲ့ အျဖစ္ဆိုး.. - Tha Dinn Oo
ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚ အတြက္ ရိကၡာ ေတြ ေတာင္ေအာက္ ဆင္းယူေပးတဲ့ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသားေလးရဲ့ အျဖစ္ဆိုး..
ဇြဲကပင္ေတာင္ေပ ၚအတြက္ ရိကၡာေတြက်ေနာ္ေတာင္ေျခကိုပို႔တိုင္းေတာင္ေပၚကေန လာဆင္းယူေပးတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားရဲ့ အျဖစ္ကိုေတြ႕ရသံေဝဂပါ……
ေတာင္ေအာက္ကသူက ေတာင္ေပၚမွာ ဘဝနိဂုံးခ်ဳပ္ ေတာင္ေပၚကသူက ေတာင္ေအာက္မွာ ဘဝနိဂုံးခ်ဳပ္
ကိုယ္လိုသလို လုပ္ယူမရတဲ့ေလာကႀကီးမွာ ေသခ်ာတာကဘယ္အရြယ္ ဘယ္အခ်ိန္ဘာအျဖစ္နဲ ႔ေသမယ္ဆိုတာကေတာ့ေသ ျခင္းတရားကအေသခ်ာ
တခဏတာေနရတဲ့ ဘဝေလးမွာေလာကႀကီးကိုသာယာလွပေစဖို႔ လူတိုင္းကိုယ္စီမွာရွိေနတတ္တဲ့ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြအတတ္နိုင္ဆုံး ခ်ိဳးႏွိမ္ပေပ်ာက္ ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုသလို မိမိကိုယ္တိုင္သည္လည္း- – -?
Source : Saw Kyi Win
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ် အတွက် ရိက္ခာ တွေ တောင်အောက် ဆင်းယူပေးတဲ့ ဘုန်းကြီး ကျောင်းသားလေးရဲ့ အဖြစ်ဆိုး..
ဇွဲကပင်တောင်ပေ ါ်အတွက် ရိက္ခာတွေကျနော်တောင်ခြေကိုပို့တိုင်းတောင်ပေါ်ကနေ လာဆင်းယူပေးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားရဲ့ အဖြစ်ကိုတွေ့ရသံဝေဂပါ……
တောင်အောက်ကသူက တောင်ပေါ်မှာ ဘဝနိဂုံးချုပ် တောင်ပေါ်ကသူက တောင်အောက်မှာ ဘဝနိဂုံးချုပ်
ကိုယ်လိုသလို လုပ်ယူမရတဲ့လောကကြီးမှာ သေချာတာကဘယ်အရွယ် ဘယ်အချိန်ဘာအဖြစ်နဲ ့သေမယ်ဆိုတာကတော့သေ ခြင်းတရားကအသေချာ
တခဏတာနေရတဲ့ ဘဝလေးမှာလောကကြီးကိုသာယာလှပစေဖို့ လူတိုင်းကိုယ်စီမှာရှိနေတတ်တဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေအတတ်နိုင်ဆုံး ချိုးနှိမ်ပပျောက် အောင် ကျင့်ဆောင်ကြဖို့လိုသလို မိမိကိုယ်တိုင်သည်လည်း- – -?
ေက်ာင္းဆရာ ၂ဦး ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လမ္းေဘး၊ တဲထိုး၊ ညအိပ္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကားလမ္း ေဖာက္တဲ့႐ြာ လြယ္ပတ္႐ြာဟာ အိမ္ရွည္ေတြနဲ႔ အရမ္းကို သာယာလွပတဲ့ ႐ြာေလးျဖစ္ပါတယ္။အရင္တုန္းကေတာ့ ျပင္ပ ကမာၻတစ္ခုလိုေပါ့။ သူစိမ္းလာရင္ ထြက္ေျပးတာကို တန္းေနတာပဲ။ကားလမ္းမရွိ ဆိုင္ကယ္လမ္းမရွိ။ ေတာလမ္းဘဲ။ အဲ႐ြာသြားေရာက္ဖို႔ နာရီမ်ားစြာ လမ္းေလွ်ာက္ရတယ္။အခု အဲ႐ြာမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္က ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းစဖြင့္တယ္။ အဲကတည္းက ႐ြာသားေတြဟာ လူ႔ကမာၻထဲ ျပန္ေရာက္လာတယ္ ေျပာရမယ္။ေက်ာင္းဆရာ ၂ဦးက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဆိုင္ကယ္လမ္း စေဖာက္တယ္။ အဲ့ေနာက္ အဲ႐ြာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ ႐ြာထိေမာင္းလာတယ္။ သူ႔တို႔အတြက္ တအံ့တဩေပါ့။႐ြာေလးက သာယာတယ္၊ လွတယ္၊ ႐ြာသားေတြကလည္း ဆက္ဆံေရး အလြန္ေကာင္းေတာ့ အလႉရွင္ေတြေရာ လာေရာက္လည္ခ်င္သူေတြကလည္း မ်ားတယ္။အဲ့ေတာ့ ကားလမ္းေပါက္ဖို႔လိုတယ္။ ေက်ာင္းဆရာက […]
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပါတီကိုအားပေးလို့ တချို့လူတွေကိုကျောခိုင်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ရွှေရူပါဦး
ရွှေရူပါဦးကတော့ Miss Equal 2019 Winner ဆုကို ရရှိထားသလို မော်ဒယ်နဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရူပါဦးကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီ ရွှေကြိုမယ်အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ရွှေရူပါဦးက နိုင်ငံရေးမှာ “ကိုကြိုက်တဲ့ ပါတီကို အားပေးတဲ့အတွက် တချို့သူတွေနဲ့ ကျောခိုင်းခဲ့ရတဲ့” အကြောင်းလေးပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ရွှေရူပါဦး ကတော့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို အားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ကို ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာကို အားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောထားကြပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ရွှေရူပါဦးရဲ့ interview ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Video ကြည့်ရန် Swelsone News
ဒီကနေ့မနက် မန္တလေးမန်းမြို့တော် ပေါက်စီဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်တင် ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်
မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ဘူတာကြီးရှေ့က မန်းမြို့တော်ပေါက်စီဆိုင် ပိုင်ရှင် အသက် ၆၀အရွယ် အမျိုးသားကြီးဟာ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး ဒီကနေ့မနက် အစောပိုင်းမှာပဲ ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “မန်းမြို့တော်ပေါက်စီဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဒီကနေ့မနက် ၆:၃၀လောက်မှာ ဆုံးသွားတာပါ၊ ICU မှာ တက်ရောက်ကုသနေတဲ့ မန္တလေးမြို့က နာမည်ကြီးပေါက်စီဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်”လို့ အမည်မဖော်လိုသူ ဆေးရုံ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက အတည်ပြုပြောပါတယ်။ မန်းမြို့တော်ပေါက်စီဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာ နို၀င်ဘာ ၁၂ရက်နေ့က ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ပြီး မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်က ဧရာ၀တီ ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာမှာ ဆေးကုသမှုစတင်ခံယူနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။နို၀င်ဘာ ၁၃ရက်နေ့မှာတော့ ပေါက်စီဆိုင်က ၀န်ထမ်း အယောက် ၆၀ ကျော်ကို ကွာရန်တင်း၀င်ဖို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး စစ်ဆေးကြည့်ရာ ၀န်ထမ်း ၁၁ ဦးမှာလည်း ကိုဗစ်ပိုးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ မိန်းမဖြစ်သူနဲ့ သားဖြစ်သူကလည်း ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီး ဒီကနေ့မှာ […]
ေအာင္ခိုင္ ဝါဝါေအာင္ နဲ႔ ဦးေဇာ္ႀကီးတို႔ကို ေၾကာ္ျငာ ေခၚ႐ိုက္ခဲ့ ၿပီး စားေသာက္ ကုန္ ပစၥည္းေတြ နဲ႔ ေလးေလး စားစား ကန္ေတာ့ ခဲ့ျပန္တဲ့ ျဖဴျဖဴေထြး